Mushure memakore makumi maviri eFBI Kuferefeta zviri pamutemo: Saudi Arabia Isina Mhosva munaGunyana 20 Rutsigiro Rutsigiro
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Saudi Arabia Kuputsa Nhau » Mushure memakore makumi maviri eFBI Kuferefeta zviri pamutemo: Saudi Arabia Isina Mhosva munaGunyana 20 Rutsigiro Rutsigiro
Airlines • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Mutungamiri weU.S. Biden vakasangana nedzvinyiriro mumavhiki apfuura kubva kumhuri dzevanotambudzwa, avo vakagara vachitsvaga marekodhi pavanotevera mhosva kuNew York vachipomera vakuru veSaudi kuti vane chekuita nekurwiswa uku.
Nyamavhuvhu 12, 2021 inogona kunge iri zuva rakanaka rekushanya kwenyika. Kwapera Mugovera, Gunyana 12, 2021, iyo FBI yakaburitsa matsva matsva marongero maererano neSeptember 11, 2001 kurwisa kwekutyisa muUnited States.
Gwaro iri rinotsanangudza mahofisi evapambi ava aive navo muSaudi asi haape humbowo hwekuti hurumende yeSaudi yaibvumirana nezano iri.
FBI yakaburitsa gwaro remapeji gumi nematanhatu richangobva kutsanangurwa rakanangana nerutsigiro rwezvinhu zvakapihwa vaviri vevapambi veSaudi mukumhanyisa kwaGunyana 16, 11.
Indasitiri yepasirese yekushanya neyekushanya yanga yakamirirawo kuti uyu mushumo weFBI uburitswe kujekesa kana Hurumende yeSaudi Arabia ikatsigira vapambi nemagandanga munaGunyana 11, 2001.
Icho chikonzero: Saudi Arabias rutsigiro razvino uye rwakapa hutungamiriri hwekushanya kwepasirese.
Chinyararire chinomira mukutsigira uye kunzwisisa Saudi Arabia chinangwa nerutsigiro rwayo runodikanwa rwekushanya munguva dzisingagone kuenda kuburikidza nepoVID-19 pendemic yaisanganisira makore ekunyengera. Kufungidzira kwacho kwakaramba kuchikwirisa zuva rega rega zvichitungamira kumhemberero yegumi nemakumi maviri yekurwiswa kwegandanga kwaGunyana 20.
Panguva imwecheteyo mabhiriyoni epanyika paakayeuka makore makumi maviri mushure maGunyana 20, purezidhendi weU.S. Biden akanamira chitsauko chekupedzisira pamusoro pechirevo ichi mukuburitsa magwaro akasarudzika eFBI kuferefeta nezve basa reSaudi Arabia - kana paine.
Setpember 12 mushure meSeptember 11, 2001 raive zuva reZuva reUnited muUnited States nenyika yakabudirira
Nyika yakashandukira United States musi waGunyana 12,2001 mukuunza nyika nePasi pamwechete musi waGunyana 12, zuva rakatevera Gunyana 11.
Nhasi maAmerican akayeuchidzwa kuti America inofanira kumira pamwechete zvakare. IUS nhasi yawana kuravira nezvekuti nyika ichave iri nani sei kana vanhu vakawana nzira yekubatana zvakare.
Kuburitsa magwaro eFBI kwaisave kungori danho repasi rose rakangwara, asi danho rakakosha pakurapa munzira.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa, makore makumi maviri apfuura maTaliban akakumbira kuUnited States kuti isarwise Afghanistan. Kushaikwa kwesarudzo yekudyidzana kwakaguma nehondo yemakore makumi maviri, uye kutya kwekuwedzera kutyisa nhasi.
Gwaro rekuferefeta reFBI rakaburitswa kwanonoka nhasi, Nyamavhuvhu 11,2021 rinorondedzera mafambisirwo evapambi ava aive navo muSaudi muUnited States asi haape humbowo hwekuti hurumende yeSaudi yakanga yakabatana nechirongwa ichi.
Iyo ndiyo yekutanga rekodhi yekutsvaga kuburitswa kubvira Mutungamiriri weUS, Joe Biden paakaraira kudzikiswa kwekuzivisa kwezvinhu izvo kwemakore zvakaramba zviri pachena kuruzhinji.
Hurumende yeSaudi yakagara ichiramba kubatanidzwa. Mumiriri weSaudi muWashington akataura neChitatu kuti inotsigira kuzara zvachose kwezvinyorwa zvese senzira "yekupedza zvimisikidzo zvisina musoro zvinopesana nehumambo zvachose".
Embassy iyi yakati chero kupomerwa kwekuti Saudi Arabia yakanga yakabatana "yaive nhema chaidzo".
Hurumende yeSaudi yakaramba kutumira mari kune vaviri vevapambi veGunyana 11, Khalid al-Mihdhar, kuruboshwe, naNawaf al-Hazmi
Mutungamiri weUnited States Biden svondo rapfuura akaraira Dhipatimendi Rezvemitemo pamwe nemamwe masangano kuti aite ongororo yekuzivisa magwaro ekuongorora uye kuburitsa zvavanogona mumwedzi mitanhatu inotevera.
Mapeji 16 akaburitswa neMugovera manheru, maawa mushure mekunge Biden apinda munaGunyana 11 zviitiko zvekurangarira muNew York, Pennsylvania, uye kuchamhembe kweVirginia. Hama dzevakakuvadzwa dzakange dzamboramba kuvepo kwaBiden pazviitiko zvemhemberero chero magwaro paakaramba akarongwa.
Rekodhi rakadzvanywa zvakanyanya rakaburitswa neMugovera rinotsanangura kubvunzana kwa2015 nemunhu ainyorera kuva mugari wemuUS uye makore apfuura akange adzokorora kutaurirana nevanhu vekuSaudi avo vaongorori vakati vakapa "rutsigiro rwakakosha rwezvigadzirwa" kune vanoverengeka vevapambi.
Vatungamiriri veBiden munaFebruary vakaburitsa ongororo yehungwaru ichibatanidza Crown Prince Mohammed bin Salman mukuuraya kwa2018 mutori venhau vekuUS Jamal Khashoggi asi vakashoropodzwa nemaDemocrat nekuda kwekurangwa kwakananga kwemuchinda korona iye.
Nezve Gunyana 11, kwave nekufungidzira kwekubata zviri pamutemo kubva nguva pfupi yapfuura kurwisa, pazvakaziviswa kuti gumi nevapfumbamwe vevapanduki vaive Saudis. Osama bin Laden, mutungamiri weAl-Qaida panguva iyoyo, aibva kumhuri ine mukurumbira muhumambo.
VaUS vakaferefeta vamwe vamiriri veSaudi nevamwe vane hukama nehurumende yeSaudi vaiziva vanoba ndege mushure mekunge vasvika muUS, sekureva kwemagwaro akatoraswa kare.
Zvakadaro, iyo 9/11 Commission chirevo chakawana "hapana humbowo hwekuti hurumende yeSaudi sesangano kana vakuru vakuru veSaudi vanobhadharwa mari”Kurwiswa kwakaitwa neal-Qaeda. Asi komisheni iyi yakacherechedzawo "mukana" wakaitwa nemasangano anotsigirwa nehurumende yeSaudi.
Kunyanya kuongororwa kwakanangana nevapambi vaviri vekutanga kusvika muUS, Nawaf al-Hazmi na Khalid al-Mihdhar. Muna Kukadzi 2000, vachangosvika kumaodzanyemba kweCalifornia, vakasangana kuresitorendi halal nyika yeSaudi inonzi Omar al-Bayoumi akavabatsira kuwana nekuhaya imba muSan Diego, aive nehukama nehurumende yeSaudi uye akange akwezva kuongorora kweFBI. .